Indlu ekumhlaba osikelwe izindlu yonke sinombuki zindwendwe onguCraig
Ukubetha ngesandla esincinci senziwe ekhaya kwi-paddock-i-twist yanamhlanje kwilizwe laseTasmania.
I-Crabtree encinci iya kuvuya ngokuthatha kwayo okuyingqayizivele ngokulula.
Ipropathi ibandakanya i-creek yangasese, i-platypus ngamaxesha, i-cheeky quolls kunye nezigidi ezininzi zeepademelons.
Balekela kwindawo ezolileyo yasemaphandleni; igqibelele kwezothando kunye nokuphumla. Zive umgama oziikhilomitha kodwa ube ufikeleleka lula kuyo yonke i-Huon Valley kunye neendawo ezikungqongileyo. Imizuzu engama-35 ukuya eHobart, i-Little Crabtree sisiseko esifanelekileyo sokuhlola.
Ndakhele eli khaya lincinci le ntombi yam kunye nam. Siyayithanda kwaye asikwazi ukulinda ukwabelana ngendlela ekhethekileyo ngayo nawe. Nangona izinto zobuqu zisekho, nceda uzenze ube sekhaya kwaye uliphathe ngentlonipho efanayo neyakho.
Ikhaya lethu liya kukubonelela ngayo yonke into oyifunayo ukuze ucime kwaye uphumle. Sinolwamkelo lwefowuni elungileyo, kwaye sinikezela ngeWiFi, kodwa dont unomabonakude okanye naziphi na izixhobo zeendwendwe. Into esinayo ziincwadi ezithile, umgangatho otshiswe lilanga, umlambo, ityholo elingacocekanga kunye nedlelo elilungele uhambo olufutshane.
Njengoninzi lweepropati zasemaphandleni, siphezu kwamanzi etanki kwaye sinenkqubo ye-septic, ngoko ke nceda uhloniphe oku ngokuqaphela amanzi kwaye ungafaki naziphi na izinto zangaphandle kwindlu yangasese.
Ngelixa izilwanyana zasendle zithandeka kakhulu, unokufuna ukucinga ngokuzisa izihlangu ebusuku, njengoko zinokuba ngamasela athatha ithuba.
Ubukhulu becala iifama ezincinci, iCrabtree ngumxube we-eclectic wakudala kunye nomtsha. Ngelixa i-Little Crabtree ixhotyiselwe ngokupheleleyo ukuzondla, kwaye yonwabele ukuhlala, ihlala iyinto yokuzonwabisa ngokuhlala kufutshane neWillie Smiths, iKitchen yasehlotyeni kunye neRanelagh General Store ethandwayo.
Ilokishi yaseHuonville ibonelela ngeevenkile ezinkulu, i-IGA, ikhemesti, iivenkile zokutya okunempilo, iibhanki, iivenkile ezinkulu ze-vegan, ithala leencwadi likarhulumente, iziko lolwazi lwabakhenkethi, ihardware kunye nokunye okuninzi.
Ngelixa uya kushiyeka ukonwabele indawo, sihlala sithumela umyalezo obhaliweyo okanye sifowuna kuphela. Ndiyavuya ukuphendula nayiphi na imibuzo, kwaye unike ulwazi lwasekuhlaleni.